Ujyaalo Times | ज्ञानेन्द्रको शतकमा काठमाडौंको फराकिलो जित
काठमाडाँै । कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको शतकको सहयोगमा दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) अन्तर्गत काठमाडौँ गोल्डेन वारियर्सले आफ्नो तेस्रो खेलमा फराकिलो जित निकालेको छ । बुधबार भएको खेलमा काठमाडौंले धनगढी ब्लुजलाई १०६ रनको फाराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो । पोखरा […]
काठमाण्डौ ( दक्षिण एसियाली खेलकुद ९साग०मा गौरिकाले सिंहले पौडीमा ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जितेकी छिन् । सातदोबाट स्थित पौडी पोखरीमा भएको स्पर्धामा गौरिकाले स्वर्ण जितेकी हुन् । उनले व्यक्तिगत २०० मिटर फ्रिस्टाइलमा भारतीय खेलाडीलाई हराउँदै सागमा पौडीमा नयाँ इतिहास बनाइन् । […]
म्यानमार र नेपाल बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल हुने !
तख्य प्रशिक्षक योहान कलिनले म्यानमारसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि २३ सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरेका छन्। गोलकिपर किरण चेम्जोङ र डिफेन्सिभ मिडफिल्डर रोहित चन्द विदेशी लिगमा व्यस्त भएकोले टीममा राखिएको छैन। फरवार्ड भरत खवास भने टिममा परेका छन्। यस्तै मिडफिल्डरद्वय सुबास […]
ज्ञानेन्द्र मल्ल बने, राष्ट्रिय क्रिकेट टिमकाे कप्तान !
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानको जिम्मेवारी ज्ञानेन्द्र मल्ललाई दिएको छ । पारस खड्काले कप्तानबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै संघले नयाा कप्तान छनोट गरेको हो । क्रिकेट संघको निलम्बन भएको भोलिपल्टै खड्काले कप्तान पद छाड्ने घोषणा गरेका थिए […]
अष्ट्रेलियाविरुद्ध खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा !
विश्वकप फुटबल छनोटको दोस्रो चरणमा अष्ट्रेलियाविरुद्ध खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा भएको छ । प्रशिक्षक योहान कालिनले अष्ट्रेलियाविरुद्ध उसैको भूमिमा खेल्ने २३ सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरेका हुन् । नेपालले यही असोज २३ गते अष्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ भने असोज २८ […]
ओलम्पिक कमिटिको अध्यक्षमा पुनः जीवनराम !
काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटि (एनओसी) को अध्यक्षमा जीवन राम श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको विशेष साधारणसभामा प्रतिद्वन्दी उमेशलाल श्रेष्ठलाई ७ भोटले पछि पार्दै जीवनराम निर्वाचित भएका हुन् । जीवनरामले १७ भोट ल्याउदा उमेशलालले १० भोट प्राप्त गरे […]
अञ्‍जनको दुई गोलमा नेपाल विजयी !
कतारमा सन् २०२२ मा आयोजना हुने विश्वकप छनोट अन्तर्गत समूह चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले शानदार जित निकालेको छ । मंगलबार भएको खेलमा घरेलु टोली चाईनिज ताइपेलाई २-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले शानदार जित निकालेको हो । ताइपे स्टेडियममा भएको […]
सावित्राको गोलमा नेपाल फाइनलमा !
नेपाल किर्गीस्तानमा जारी नादेझ्दा कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार भएको समूह चरणको नतिम खेलमा ताजिकिस्तानलाई १-० ले पराजित गर्दै नेपाल उपाधि नजिक पुगेको हो । नेपाललाई जित दिलाउन सावित्रा भण्डारीले निर्णायक गोल गरिन् । उनले खेलको […]
चाइनिज ताइपेसँग सामना गर्न तयार छौं !
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङले विश्वकप छनोट अन्तर्गत घरेलु टिम चाइनिज ताइपेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न टिम तयार रहेको बताएका छन् । कतारमा सन् २०२२ मा आयोजना हुने विश्वकपको छनोट अन्तर्गत चाइनिज ताइपेसँगको खेलअघि प्रि म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै […]
किर्गिस्तानविरुद्ध नेपालको ८ गोल (Video Live)
काठमाडौं । किर्गीस्तानमा जारी नादेझ्दा कप फुटबलको पहिलो खेलमा नेपालले अहिले आयोजक किर्गीस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । काराकोलस्थित सेन्ट्रल स्टेडियममा जारी खेलको सुरुवातमै नेपालले किर्गीस्तानविरुद्ध गोल गरेको छ । नेपालका खेलाडीले ८ गोल गरेर नेपाललाई अग्रता दिलाएका छन् । […]